बाढी पिडितको सहयोगमा ‘२ रुपैँया’ र ‘ई–सेवा’, जम्मा भयो यति रकम | Radio Langtang 90.3 Mhz
बाढी पिडितको सहयोगमा ‘२ रुपैँया’ र ‘ई–सेवा’, जम्मा भयो यति रकम
Post on: August 15, 2017
अहिले तराईका अधिकांश भागहरु बाढीको चपेटामा रहेको छ । पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा गत शुक्रबार बिहानदेखी परेको अबिरल बर्षाका कारण बाढीको असर झन् झन् बढ्दै छ । हिजोबाट मौषममा केहि सुधार आएका कारण बाढी पिडितको सहयोगार्थ पुगेका संघसंस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई काम गर्नको लागि केहि सहज भएको छ ।
बाढी पिडितहरुको सहयोगार्थ बिभिन्न संघसंस्था तथा कलाकारहरु जुटिरहेको समयमा चलचित्र ‘२ रुपैँया’ टीम र ‘इ–सेवा’ले पनि बाढी पिडितहरुलाई सहयोग गर्ने एकदमै सजिलो उपाय निकालेको छ । चलचित्रका नायकद्धय आशिफ शाह र निश्चल बस्नेतले यो अभियानको सुरुवात गरेका हुन् । जि२१ पिक्चर्स र ब्ल्याक हर्स पिक्चर्सले ई सेवासँग मिलेर यो अभिनयानको थालनी गरेको हो ।
बाढी पिडितहरुको लागि निश्चल बस्नेत र आशिफ शाहले ५०–५० हजार रुपैँया सहयोग गरेका छन् । यस्तै ई सेवाको तर्फबाट १ लाख ५१ हजार र इ सेवाको फोनपे प्राईभेट लिमिटेडले २ लाख रुपैँया सहयोग गरेको छ । अभियानको लागि बनाएको एक भिडियोमा निर्देशक तथा कलाकार निश्चल बस्नेतले भने, ‘सकिन्छ भने बाढीग्रस्त क्षेत्रमा आफैँ गएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि सकिदैँन भने घर बसि बसी पनि तपाईहरुले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’
कसरी गर्ने त बाढीपिडितलाई सहयोग ?
बाढी पिडितहरुको लागि सहयोग गर्नको लागि आफुनो मोवाईल वा कम्प्युटरको ब्राउजरमा गई https://donation.esewa.com.np मा जानुपर्ने जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ आफुले दिन चाहेको रकम, नाम र मोवाईल नंबर भरिसकेपछि त्यो रकम बाढीपिडितहरुको लागि डोनेट हुन्छ । यदि आफुसँग ई सेवा अकाउन्ट छैन भने मोवाईल बैंकिङ एपमा रहेको एप्लिकेसनमा फोनपे अप्सन सेलेक्ट गरी Helpterai कोड प्रयोग गरेर पनि सहयोग गर्न सकिने भिडियोमा बताईएको छ । ई–सेवा र बैंकिङ एप्लिकेसन नभएकाहरुले घर नजिकैको ई सेवा एजेन्सीमा गएर पनि सहयोग गर्न सकिने नायकद्धय निश्चल र आशिफले दिएका छन् । बिदेशमा रहेकाहरुले मोवाईल नंबर +९७७ ९८६८८४२१२१ मा भाईबरबाट सबैकुरा बुझ्न सकिने कुरा भिडियोमा देखाईएको छ । अभियानको बारेमा थप बुझ्नको लागि टोल फ्रि नं. १६६००१०२१२१ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अभियानमा ४ लाख ७१ हजार भन्दा धेरै रकम जम्मा भईसकेको छ ।
प्रहरी र साझा पार्टीका कार्यकर्तावीच ठेलाठेल
तीन दलको निर्णयः प्रदेश र संघको चुनाव मंसिर दोस्रो साता
नुवाकोटे जनतालाई साम्यवादको हावाले नछुने काँग्रेसका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीको भनाइ
विदुर कार्तिक २२, नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति एवं प्रतिनिधीसभा २,प्रदेशसभा १ का उमेदवार जगदीश्वरनरसिंह केसीले वामगठवन्धनको नाममा ल्याउन खोजिएको साम्यवादको ...
रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका २ स्याउबारी नजिकको भिरमा डिब्बा दुर्घटना भएको छ ।केरुङबाट काठमान्डौतर्फ जादै गरेको न ७ ख १६४ ...
जिम्बाम्बेसँग पनि हार्‍यो अफगानिस्तान, अब नेपाललार्इ कति सहज?
आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटअन्तर्गत समूह ‘बी’ को खेलमा जिम्बावेले अफगानिस्तानमाथि २ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। रोमाञ्चक खेलमा जिम्बावेसँग २ रनले पराजित भएसँगै अफगानिस्तानले ...